Sekuyaphela ukuqagula ngabanqobe ukhetho – LIVE Express
Siya ngokuya sifika emaphethelweni isikhathi sokuqagela ngokuthi yiliphi iqembu elizodla umhlanganiso emawadini kanye nakomasipala abahlukene ezweni lonke.
Lokhu kuza njengoba iNingizimu Afrika ibibambe ukhetho lohulumeni basekhaya olukade lalindelwa ngoLwesithathu, mhlaka-3 August 2016.
Iziteshi zokuvota ezweni lonke zivulwe kusukela ngehora lesikhombisa (7am), ekuseni, zavalwa ngelesikhombisa (7pm), kusihlwa. Kodwa-ke inhlangano eyengamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC) ikuvumelile ukuvota kwabantu emva kwa-7pm kulabo okushaye isikhathi sokuvala sebevele bekulayini.
Ezinye iziteshi zokuvota kubikwa ukuthi zisheshe zaqala ukubala ngenxa yokuthi zikwazile ukuqeda ngesikhathi kanti imiphumela yokhetho iqalile ukufika esikhungweni esikhipha imiphumela yokhetho, i-National Results Operation Centre (ROC), ePitoli, ngaphambi kwehora leshumi ebusuku (10pm), ngawo uLwesithathu.
Osopolitiki abamele amaqembu abo bagcwele kulesi sikhungo njengoba befuna ukuzibonela bukhoma ukuthi amaqembu abo enze kanjani okhethweni ikakhulukazi kulezo zindawo obekunezinga eliphezulu lokuncintisana kuzona.
i-Eastern Cape ibe yisifundazwe sokuqala ukukhipha imiphumela yokhetho kanti iyaqhubeka nokuphuma imiphumela yeziteshi zokuvota ezihlukahlukene ezweni lonke.
Phakathi komasipala okulindelwe ngabomvu imiphumela yabo, kubalwa labo abangama-metro, nokuyi-Johannesburg (e-Gauteng), i-Tshwane (e-Gauteng) kanye ne-Nelson Mandela Bay (e-Eastern Cape), nalapho kulindeleke ukuba kube nguqhude manikiniki phakathi kweqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) kanye ne-Democratic Alliance (DA).
i-ANC iyona eqhoqhobele izintambo kulabo masipala kanti i-DA inethemba lokuthi ingase iyiphuce iqatha emlonyeni njengoba isinesikhathi eside ibaconsela amathe.